Soomaaliya dab ayey mar kale ku ciyaareysaa (Iskala mid ahaanshaha 1977 iyo 2021) - Axadle Wararka Maanta
By Newsroom	 On Apr 16, 2021
Inta Aan ka Hadal Soomaaliya ka hor, waxaaynu dulmareynaa dhacdooyinka dalalka gobalka; Bal u fiirso xaalada Yemen oo ay ku dagaalamayaan quwado shisheeye, oo ay horboodayaan muwaadiniin Yemeniyiin ah, sabab kasta ha noqotee.
Sacuudi Carabiya iyo Isutagga Imaaraatka Carabta ayaa iska kaashanaya la dagaalanka Iiraan ee Yemen. In la burburiyo dal aan kooda ahayn, ubadkoodana aan wax loo dhimayn.
Fiiri waxa ka socda Liibiya, maadaama aan wadaagno qaarad isla markaana xiriir la soo yeelanay Soomaalida horay. Ma tirin kartaa tirada waddamada ku lugta leh Liibiya?
Dal kasteba wuxuu dhacayaa kheyraadka dabiiciga ah ee dalka xilli dadka reer Liibiya ay u dhimanayaan dagaal iyo macaluul.
Intaas waxaa sii dheer, waxa ka socda Suuriya waa kiis kale, oo ay ka mid yihiin inay ka baryotamaan muwaadiniinteeda waddooyinka Muqdisho, iyagoo dalkooda uga cararaya dagaal aysan qayb ka ahayn, dagaal u dhexeeya quwado shisheeye, dagaal uu dhaliyay madaxweyne iskii isku magacaabay.
Dhanka kale Soomaaliya, xiriirkii ay la laheyd Midowgii Soofiyeeti waxaay uu jareen 1977, halka Midowgii Soofiyeeti uu siinayey qalab ciidan iyo tababar ciidankii Soomaaliya.
Arrintaas waxay keentay in Ruushku saacado kooban gudahood ugu dhaqaaqo dhinaca Itoobiya waxaana uu siyey qalab militari, isla markiiba, Soomaaliya waa lagu jebiyay dagaalka, inkasta oo markii hore ciidanka Soomaaliya ay hoggaanka u hayeen dagaalka. Itoobiya oo taageero ka helaysa Midowgii Soofiyeeti.
Guuldarrada Soomaaliya kuma ekaan guul guul daradii laga guuleystay, ee waxay si joogto ah u burburinaysay dhammaan kaabayaashii dowladda illaa nidaamkeeni dawladnimo uu aakhirkii burburay.
Ma sahlaneyn in la helo bedelkii Midowgii Soofiyeeti waana in si nidaamsan loo beddelaa Soomaalida, si xiriirkoodu u noqdo mid la isku halleyn karo. beddelka waxaa ka mid ahaa; Dhaqaalaha, ciidanka, aragtida, nidaamka bulshada iyo dowladnimada oo ahayd inay noqoto mid dimuqraadi ah si ay taageero buuxda uga hesho wadamada NATO. Isbadalkan wuxuu ahaa howl adag, waana mida keentay burburka dowladdii militariga.
Dhaxalka naxdinta leh ee laga dhaxlay masaafurintii Midowgii Soofiyeeti sanadkii 1977 waa mid ay wada yaqaanaan inta indheer garadka ah oo saameyn ba’an nagu yeelatay muddo 44 sano ah Hada waxaad moodaa inaan bilownay nidaam dimuqraadi ah oo aan isku aamini karno taageerada beesha caalamka, baarlamaanka waqtigiisu dhamaaday iyo madaxweynaha waxay qaadeen talaabo taa lamid ah 1977. Waxay iska indha tireen saamaynta beesha caalamka, oo kahadashay sida aysan waligood u taageeri doonin mid hal dhinac ah, go’aan is barbar socda iyo ku darsasho.
Soomaaliya hadda way ka tabar yar tahay kana liidato sidii ay aheyd 1977. Ma lahan ilo dhaqaale oo ay ku tiirsanaato, maadaama bulshada caalamka ay ka taakuleyso miisaaniyadda Soomaaliya 61%. Gcanta uguma jirto dhamaan gobolada dalka halka qaybo badan ay ka taliyaan Al-Shabaab.
Soomaaliland sidoo kale waxay sheegataa inay ka go’day Somaliya inteeda kale. Seddex FMS ayaa si toos ah iyo si dadbanba u diiday go’aankii golaha shacabka ee baarlamaanka ee ahaa in waqtiga loo kordhiyo xafiiska hey’adaha dowliga ah, beesha caalamkuna waxay si adag uga soo horjeesatay go’aanka aqalka hoose ee baarlamaanka ee waqtiga loogu kordhiyay.
Sidaas darteed waxaa iska cad in go’aanka xildhibaanada hoose uusan dhaqan geli doonin. Laakiin walaaca ayaa ah; in madaxweynuhu taageero ka raadsado Shiinaha, Eriteriya iyo Ruushka halka uu diiday taageerada iyo talo bixinta UN, US, UK, EU iyo AU.
Su’aasha isweydiinta mudan ayaa ah, maxaa dhici doona haddii Ruushka iyo Shiinaha ay aqbalaan casuumaadda Farmaajo oo ay farageliyaan arrimaha Soomaaliya Dhanka kale, Mareykanku wuxuu cunaqabateyn ku soo rogi karaa Guddoomiyaha Baarlamaanka, Hogaamiye ku-xigeenka Baarlamaanka oo mas’uul ka ahaa muddo kordhinta iyo Hogaamiyaha waqtigiisu dhammaaday ee ku cadaadiyay Baarlamaanka inuu qaato go’aanka, waxay sii murgineysaa xaaladda lidata ee Soomaaliya iyo gaar ahaan doorashooyinka.
Dowladahan wax saameyn ah kuma yeelan Soomaaliyada cusub, lamana filan karo saameyn togan. Waxa kaliya ee la filan karaa waa inay hub iyo ciidan u soo dhoofiyaan Soomaaliya, tani ma ahan wax u roon soo kabashada Soomaaliya, waxayna noqon doontaa goob dagaal sida Suuriya iyo Liibiya oo kale.
Waxaa qoray: Ahmed Ainab
calm in Guinea and the Democratic Republic of Congo, but experts from